अस्तायो निर्मलाको न्यायको कुरा, उदायो सुन्दरी श्रृंखलाको चर्चा ! – Rastriyapatrika
अस्तायो निर्मलाको न्यायको कुरा, उदायो सुन्दरी श्रृंखलाको चर्चा !
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का ठूला नेताहरू सुन्दरी जिताउने अभियानमा लागेका छन् । उनीहरूले सबै कामको माया मारेर सुन्दरी जिताउने अभियानमा सक्रिय भएका हुन् ।
बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तले न्याय नपाएर दोषीलाई कारबाहीको माग गरेर बुबाआमा धर्ना बसिरहेका बेला पूर्वएमालेका नेताहरू भने सुन्दरी जिताउनेतिर लागेका छन् । उनीहरूको आलोचना हुन थालेको छ ।
विश्व सुन्दरी प्रतियोगितामा भाग लिन पुगेकी श्रृंखला खतिवडाका लागि सामाजिक सञ्जालहरूबाट भोट मागेका छन् । भोट माग्ने सूचीको अग्रस्थानमा स्थायी समितिद्वय शंकर पोखरेल र योगेश भट्टराई छन् ।
प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद विरोध खतिवडाकी छोरी श्रृंखला खतिवडाका लागि नेताहरूले भोट मागेका छन् । सुन्दरी प्रतियोगिता हुनु हुँदैन भन्ने नेताहरू अहिले भने सुन्दरी जिताउने अभियानमा लागेपछि धेरैले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन् ।
पोखरेल प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री समेत हुन् । उनले आफ्नो फेसबुक वालमा श्रंखलाको भिडियो सेयर गरेका छन् ।श्रृंखला खतिवडालाई जिताउन सामाजिक सञ्जालमा अभियान चलाए जस्तै निर्मला पन्तका दोषीलाई कारबाही गराउन अभियान किन नचलाएको भनेर फेसबुक र ट्वीटरमा एमाले पृष्ठभूमि भएका नेताहरूमाथि प्रश्न पनि उठेका छन् ।
सांसद समेत रहेका भट्टराईले पनि श्रृंखला खतिवडाका लागि भोट मागेर सामाजिक सञ्जाल रंगाएका छन् । श्रंखलाका लागि भट्टराईले ट्वीटर र फेसबुकबाट भोट मागिररहेका छन् ।
एमाले पृष्ठभूमि भएका अधिकांश नेताहरूले श्रृंखला खतिवडाका लागि धमाधम भोट मागिरहेका छन् । भोटिङमा श्रृंखला अगाडि रहेको पूर्वएमालेका नेताहरूले बताएका छन् । मिस वर्ल्र्ड प्रतियोगितामा १ सय २१ देशका सुन्दरीहरू सहभागी छन् ।